ianao eto: Home Hair Care
Ny mahatonga ny volo aretina
Trichology dia niantso ny anankiray tamin'ny foto-kevitra ara-pitsaboana maro, mikendry ny aretina, fitsaboana, ary koa ny fisorohana ny aretina sy ny fianarana ny volo sy ny loha. Ny mahatonga ny volo aretina ny mahantra toe-piainana misy ny volon, ihany koa, voloina toy ny hoditra, no mahatonga lafin-javatra isan-karazany, eo izay tokony homarihina: aretina ny taova sy ny ambany tsimatimanota; hormonina sy ny aretina mitaiza … Continue Reading Ny mahatonga ny volo aretina →
More: Ny mahatonga ny volo aretina
Sokajy: Hair Care
Hihety volo vavy "Cap"
Lava volo - no tena ravaky ny misy fashionista, ary ny fototry ny ny avonavona. Fa iray ihany ny fisian'ny lava volo dia tsy ampy: mba hanome boky sy ny endrika, mba hanamafisana ny tombony tsara tarehy sy milamina ny tavanao hihety volo ho an'ny endrika. Raha ny taovolony dia voafidy tsara araka ny karazana ny volonao, Matokia, fa nanintonana ny fijery sy ny gaga.
More: Hihety volo vavy "Cap"
Fa misy vehivavy ny safidy ny vaovao efa ho foana taovolony – aretin'andoha miaraka amin'ny faniriana mba hitarika ny fanandramana, ary Sanatria, dia tsy.
More: Vehivavy hihety volo – ny fomba hanaovana safidy?
Vehivavy hihety volo Cascade
Any vehivavy no mahalala, tahaka ny sarotra indraindray ny mifidy izay hihety volo. Vehivavy te-Tena hanamafisana endriny, Asehoy ny volo, ny hatsaran-tarehiny dia mba makà sary mahaliana.
More: Vehivavy hihety volo Cascade
Ahoana no manenona Afrikana mirandrana?
Mirandrana Afrikana efa nahazo laza be teo anivon 'ny tanora. Rehefa dinihina tokoa, dia tena tsara tarehy, lamaody sy ny stylish. Maro no mijery ny bandy na ankizivavy tamin'ny volon ary matetika manontany tena hoe: "Tena mahaliana, sy ny fomba Afrikana manenona mirandrana?»
More: Ahoana no manenona Afrikana mirandrana?
pejy 1 avy amin'ny 6
volo fanitarana, vidin'ny.
fiovana fijery, Hanova fiainana ...